Accueil > Gazetin'ny nosy > FLM Antananarivo : Tratra ireo namono an’i Hélène Ralivao
FLM Antananarivo : Tratra ireo namono an’i Hélène Ralivao
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly zoma faha 06 martsa 2020 ny sinodam-paritanin’Antananarivo tetsy amin’ny fiangonana FLM Ambatonakanga. Ny pastora Dr Rakotozafy Dénis izay filoha lefitra ny Sinoda, Pastora Gilbert Randrianirina ary Pastora Ratefiarivony Jacques Audace no niara-nisalahy tamin’izany. Mahakasika ny nahafatesan’ny tompokovavy Ralivao Hélène, filohan’ny Vehivavy Loterianina Malagasy, vadin’ny pastora Razafimiaramanana Réné, izay mpiandraikitra ny toby eny Ambohibao no nanomezana vaovao tamin’izany.
Raha averina ny tantara dia nisy namono ny alahady faha 23 febroary 2020 tamin’ny tolakandro ity ramatoa ity raha avy nivavaka tany ampiangonana. Tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka no nahafaty azy. Naolana sy nampijaliana izy na dia efa 67 taona aza. Ny alin’ny alahady vao hita ny fatiny teo amin’ny fasana amin’ny làlana mankany amin’ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena.
Nanao ny fikarohana avy hatrany ny tompon’andraikitra amin’ny tsy fandriam-pahalemana teto Madagasikara. Ny zandary avy eo Ambohibao manokana. Vokatr’izany dia tratra ireo nahavanon-doza afaka 10 andro taty aoriana. Tovolahy telo izay mpanao baolina avy eny Ambohimanarina izy ireto. Ny findain’Itompokovavy Ralivao Hélène no nahatrararana azy ireo. Ilay olona nividy azy no tratra ka nanambara ny nahazoany azy. Rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa izy telo lahy ireto no namono ity ramatoa ity ary niaiky ny heloka vitany.
Araka ny fanambarana dia avy nanao baolina ireto tanora ireto ka nifoka rongony tao akaikin’ny fasana iray. Tamin’izany no nitomboan’ny hevitr’izy ireo hoe hanendaka satria tsy nanam-bola koa. Tamin’izay indrindra no nandalo i Ralivao Hélène ka avy hatrany dia nosamborin’izy ireo. Nisy fasam-poana teo amin’ity toerana ity ka tao anatin’izany no nanolanan’izy ireo ity ramatoa ity sy nangalany ny fananana rehetra teny aminy. Rehefa vita ny nataon’izy ireo dia nilaozany tao anatin’ny fasana ilay ramatoa. Ny alina tamin’ny 1 ora no tsikaritra teo akaikin’ny fasana ny lamba nanaovan’ity vehivavy ity. Hita tao anatiny ny vatana mangatsiakan’ity ramatoa ity.
Teo anatrehan’ny fahazoana ny mpamono an-dRalivao Hélène izao dia nisaotra ny mpitandro ny filaminana sy ny fanjakana ny sinodam-paritany FLM eto Antananarivo. Nosinganiny manokana koa i Razanamahasoa Christine filohan’ny Antenimierampirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria ary ny ben’ny tanànan’Ambohibao izay isan’ny nanampy sy nandray andraikitra manokana tamin’izao raharaha izao.